Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Kaliya 10% marka la eego 1 bilyan oo baabuur ayaa dhab ahaantii ammaan ah
Cilmi -baaris cusub oo laga sameeyay Canalys ayaa muujineysa in astaamaha nidaamka caawinta darawalka ee horumarsan (ADAS) lagu rakibay kaliya 10% 1 bilyan oo baabuur oo adduunka oo dhan laga isticmaalo dhammaadka 2020. Saddex meelood oo ka mid ah baabuurta cusub ayaa hadda lagu iibiyaa astaamaha ADAS suuqyada waaweyn sida Mainland Shiinaha, Yurub, Japan, iyo Mareykanka, laakiin waxay noqon doontaa dhowr sano ka hor inta aan lagu rakibin kala bar dhammaan baabuurta waddooyinka adduunka.
Astaamaha ADAS waxaa ka mid ah koontaroolka socdaalka ee la-qabsiga, caawinta haadka haynta, bareega deg-degga ah ee otomaatiga ah, iyo feejignaanta goob-la'aanta. Adigoo adeegsanaya dareemayaal iyo kaamirooyin, sifooyinku waxay si firfircoon uga ilaalin karaan gaadhi meel fog oo ka fog gaadhi kale oo hore, baabuurka ku haynaya haadkiisa, gaadhi si joogsi ah u joojiya marka ay jirto xaalad degdeg ah, aqoonsiga baabuurta kale ama dadka lugaynaya ee soo socda iyo in ka badan.
DAS ee baabuurta cusub iibin
Astaamaha ADAS ayaa si isa soo taraysa loogu heli karaa sidii caadiga ama ikhtiyaar ahaan baabuurta cusub ee caadiga ah iyo xitaa moodooyinka heerka gelitaanka. Tusaale ahaan, cilmi-baaris laga sameeyay Canalys ayaa muujineysa in astaamaha caawinta haadka-haynta, kaas oo markii la dhaqaajiyo siiya kaalmo isteerinka ah si baabuurka loogu sii hayo haadkiisa, lagu rakibay 56% baabuurta cusub ee lagu iibiyey Yurub qeybtii hore ee 2021, 52% gudaha Japan, 30% Dhulka Shiinaha iyo 63% Mareykanka. Canalys waxay u faahfaahisay dhammaan astaamaha ADAS ee lagu soo daray baabuurta cusub, oo ay suuqa ugu weyn saddexdii biloodba mar.
“Ku darista astaamaha ADAS ee baabuurta cusub waxay saamayn togan ku yeelan doontaa nabadgelyada waddooyinka, iyadoo la yarayn doono tirada shilalka sidaasna ay ku dhintaan, maaddaama shilalka badankoodu ay ka dhasheen mashquulinta darawalka ama khaladka. Astaamaha ADAS waxay u shaqeeyaan si firfircoon si ay u ilaaliyaan darawalada, rakaabka iyo dadka kale ee isticmaala waddada, ”ayuu yiri Chris Jones, Madaxa Falanqeeyaha baabuurta ee Canalys. "Laakiin iyada oo gelitaanka astaamahaan caawinta darawalnimada ee baabuurta cusub ay ku sii kordhayaan heer wanaagsan, marka la eego celceliska da'da baabuurta la adeegsanayo ayaa ka weyn 12 sano, in ka yar 75 milyan oo baabuurna waa la iibin doonaa 2021, waxay qaadan doontaa sannado badan kahor xitaa kala bar hal bilyan oo baabuur oo adduunka laga isticmaalo ayaa leh astaamaha. ”
ADAS gudaha diiwaan gashan baabuurta la isticmaalayo
“Dhamaadka 2020, Canalys waxay ku qiyaastay inay jireen 1.05 bilyan oo baabuur oo adduunka oo dhan laga isticmaalo. Laakiin astaamaha muhiimka ah ee ADAS waxaa lagu rakibay ku dhawaad ​​10%, ”ayuu yiri Jones. “Haddii loo malaynayo in wadarta tirada baabuurta la isticmaalayo ay weli tahay hal bilyan oo calaamad u ah tobanka sano, tani waa fursad cajiib ah oo muddo dheer ah oo loogu talagalay soo-saarayaasha baabuurta iyo gaar ahaan alaab-qeybiyeyaasha teknolojiyadda ADAS iyo la-hawlgalayaasheeda. 900 milyan oo baabuur oo waddada maraya hadda ma laha astaamaha ADAS.
“Dib -u -habeynta astaamaha ADAS ee baabuurta duugga ah ma aha ikhtiyaar - faa'iidooyinka badbaadadu waa inay ku yimaadaan baabuur cusub. Fursadda ADAS ee tobanka sano ee soo socota iyo wixii ka dambeeya waa mid aad u weyn, ”ayuu yiri Sandy Fitzpatrick, VP -ga Canalys. “Dhaqaalaha baaxadda leh ayaa hoos u dhigi doona qiimaha dareemayaasha looga baahan yahay ADAS, laakiin iyada oo ay taasi jirto, Canalys ayaa hadda saadaalisay in kaliya ku dhawaad ​​30% baabuurta la isticmaalayo ay yeelan doonaan astaamaha ADAS sannadka 2025 iyo ku dhawaad ​​50% sannadka 2030. Kuwa baabuurta sameeya ee ku jiri kara sida caadiga ah ee dhammaan baabuurtooda cusub, oo aan lahayn qiimo weyn, waxay yeelan doonaan faa'iido tartan ah. ”
Ku darista qasabka ah ee ADAS ee baabuurta cusub waxay gacan ka geysan doontaa kordhinta gelitaanka. Qorshayaasha burburka si meesha looga saaro duugga, wasakhaynta badan, baabuurta yar ee nabdoon ee waddooyinka ayaa waliba caawin doona. Laakiin isgaarsiin xooggan, jiil-dalab iyo waxbarasho ku saabsan faa'iidooyinka ADAS ayaa fure u ah-iibsadayaashu waxay u baahan yihiin inay raadsadaan baabuur leh ADAS, astaamaha waa inay ahaadaan kuwo sahlan in la isticmaalo, waa inay kor u qaadaan inaysan hor istaagin waayo-aragnimada wadista, iyo darawalada waa inay aaminaan oo adeegsadaan Astaamaha.
Nasiib darro, iyada oo ay yaraadeen qaybtii dhowaan iyo saamaynta masiibada, warshadaha baabuurta ayaa la kulmay carqalad aad u weyn 18kii bilood ee la soo dhaafay. Wakhti dheer oo sugitaan baabuurta cusub, suuqa baabuurta ee la isticmaalay wuxuu yeeshay heshiis kiro oo cusub. Marka la eego tirakoob ahaan ADAS ee baabuurta la isticmaalo, koritaanka dhexgalka ADAS ayaa saamayn doona muddada gaaban.